Cristiano Ronaldo Hadii Aan Kahadlo Abaalmarintii Lasiiyay Messi Koobka Aduunka Waxaan Kabaqaa In Layxiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cristiano Ronaldo Hadii Aan Kahadlo Abaalmarintii Lasiiyay Messi Koobka Aduunka Waxaan Kabaqaa In Layxiro
Weeraryahanka Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa ku kaftamay in loo diri doono xabsiga haddii uu ka hadlo go’aankii ay FIFA abaalmarinta Golden Ball ee xiddigii ugu wanaagsanaa Koobka Adduunka ku siisay xiddiga ay xafiiltamaan ee Lionel Messi.
Ronaldo, oo ku guuleystay abaalmarinta Xiddiga Sannadka Yurub (European Player of the Year) Khamiistii, ayaa diiday inuu ka hadlo fikirkiisa ku aadan go’aankii kabtanka Argentina loogu magacaabay xiddigii ugu fiicnaa Koobkii Adduunka ee xagaagaan ka dhacay Brazil.
Messi ayaa ka caawiyey xulkiisa inay gaaraan finalka Koobka Adduunka, halkaasoo xulka reer South America ay guul darro 1-0 ah ugu saarisay Germany, laakiin Ronaldo ayaa ka dhawaajiyey inuu dareensan yahay in xiddiga Barcelona uusan u qalmin inuu ku guuleysto abaalmarinta.
Ronaldo, oo la hadlayey TV-ga reer Portugal ee TVI ayaana kaftan ka dhigtay arrinta Messi: “Haddii aan sheego waxkasta oo aan ku fikirayo, waxaa la i dhigi doonaa xabsi,” ayuu yiri ka hor inta uusan qoslin.
Xiddiga Real Madrid ayaa hadalkiisa kusii watay: “Qofkasta ayaa arkayey, waxayse FIFA gaartay go’aankeeda gaarka ah, dadka daneeya kubadda cagta adduunka waa kuwo caaqiliin ah.
“Su’aashaani waxay ku fiicnaan laheyd isaga (Messi). Daacadnimadii anigu waxba kama dhihi karo. Qofkasta shaqadiisa ayuu qabsadaa, qofkastana wuxuu soo bandhigaa awoodiisa ugu wanaagsan. Labadooduba waxay doonayaan inay noqdaan kuwa ugu fiican. Aniga ahaan, fikirkeyga ahaan, aniga ayaa ah midka ugu fiican.”
Messi ayaa dhaliyey afar gool isla markaana hal gool caawiye ka noqday intii lagu jiray Koobka Adduunka, laakiin qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa wuxuu soo bandhigay intii lagu jiray wareega group-ka, isagoo aan wax gool ah dhalin kulamadii bug-baxda (Knock-out).